अभिव्यक्ति, वचनहरू, उपदेश र वचनहरू तिनीहरूले अब प्रयोग गर्दा गायब मर्न। सेट वाक्यांश प्रयोग गर्न, तपाईँले आफ्नो अर्थ जान्नु आवश्यक छ। तर एक मानिस केही अभिव्यक्ति सामग्री समय स्लिप। हामी यो कुरा छौँ आज (हामी विशेष कुरा भने अर्थ phraseologism) शानदार लोक बुद्धि "प्याज शोक" चाहँदैनन् अज्ञात grits शताब्दीयौंदेखि हराएको।
त्यसैले छ छैन आवश्यक आँसु बगाउन जो विकार, कुरा। उदाहरणका लागि, एक जवान बच्चा धेरै मिठो दाँत छ, तर उहाँले मेरो आमा दिनुभयो जो क्यान्डी, उहाँले गुमाए। र उहाँले आफ्ना व्यवहार सारा घर देखि परेशान यति गर्जन थाले। यो के हो? यहाँ, दिगो वाक्यांश "प्याज शोक" पूर्ण फिट (अर्थ phraseologism पछि मात्र स्पष्ट हुनेछ)। प्याज दुःख सम्झन्छन् दर्शक शोक आँसु गर्न दुखी हुनुको लायक छैन भनेर विचार गर्दा। तर, रो छ जो यस दुःखद क्षण मा सोच एक: "उहाँले के थाह, यो अवलोकनकर्ताले! आफ्नै क्यान्डी गएको थिएन! "। आँसु को वैधता को प्रश्न अलि पछि तल व्याख्या गरिनेछ, र, तर अहिले गरेको तरकारी, को हितोपदेश संलग्न कुरा गरौं।
र यहाँ धनुष छ?
कहिल्यै यो जडिबुटी साफ छ जो सबैलाई झूठ छैन: तपाईं एक चक्कु संग भने, यो आँसु धेरै हुनेछ। प्याज को प्रक्रिया समयमा मानिस समुद्र र आँसु को समुद्र खन्याइदिएकी, तर चाल गर्न Resort भने, पानी निरन्तर आँखा बाट बग्ने छ भन्न छैन। एक तथ्यलाई यो "तरकारी" विकार कुनै विशेष कारण संग असहमत गर्न सक्दैन।
र trifling बारेमा चिन्ता गर्ने मानिस। वास्तवमा, अवलोकनकर्ताले को दृश्य को बिन्दुबाट, कारण कुनै आँसु: एक बालकको क्यान्डी robbed र उहाँले यो गुमाए। स्कूल को विद्यार्थी कक्षा मा परीक्षण वा एक चौथाई लागि कम अंक प्राप्त - यो सबै अर्थहीन, हुनत, पाठ्यक्रम, तुलना गर्न खोजिरहेको छ। हामी आशा अब वाक्यांश "प्याज शोक" (phraseologism मूल्य पहिले नै खोल्न) को अर्थ बुझ्न।
मानिसको नातेदार र निरपेक्ष दुःख बारेमा
हामी "प्याज" समस्या मा रिपोर्ट को बिन्दु बाहिर अवलोकनकर्ताले खडा भनेर बुझे मानौं। र नैतिक वा शारीरिक यातना सीधा अनुभव गर्नेहरूलाई के गर्ने? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर Frankl निरपेक्ष दुःख बताए। तिनीहरूले आफ्नो वास्तविक आकार बिना प्राण सबै रिक्त स्थान भर्न।
उदाहरणका लागि, त्यो एक नड़ भङ्ग, वा मान्छे भोक पीडित। एक निश्चित बिन्दुमा, दुःख यी आत्मपुरक अनुभव एक साधारण व्यक्ति को दृश्य को बिन्दुबाट, यो अवस्था निरर्थक र अन्याय देखिन्छ हुनत, बराबर छन्। तर यो आत्मपुरक तनाव को डिग्री मापन गर्न सम्भव थियो भने, दुवै अवस्थामा, यो बराबर हुनेछ। तसर्थ, यो बारेमा मूर्ख तपाईं देखिन्छ रूपमा, अर्को मानिसको बलियो भावनात्मक अधिभार हेर्न जब वाक्पद्घति "प्याज शोक" (अर्थ phraseologism माथिको छलफल) प्रयोग गर्न हतार छैन। शायद, यो कारण छैन त सानो छ।
गरेको क्यान्डी संग बच्चा फर्केर जान दिनुहोस्। हो, एउटा वयस्क सबै अर्थहीन छ लागि, मीठो यो, लाग्छ। र बच्चा मिठास लागि - यो जीवन, अल्फा र अस्तित्व को ओमेगा उद्देश्य छ। कल्पना एक दार्शनिक मानव जीवन को अर्थ बारे विश्वव्यापी जवाफ फेला र अचानक भूल! आफ्नो निराश कल्पना? कि यो हो। र तपाईं, चकलेट भन्छन्।
त्यसैले, तपाईं अभिव्यक्तिमा Indulge अघि "पहाड प्याज", ध्यान दिएर सोच्न आवश्यक छ। निस्सन्देह, यो सान्त्वनादायी छ, तर पनि धेरै दुख्छ।
"Desu": के यस शब्द अर्थ राख्छ? कहाँ र किन प्रयोग गरिन्छ?
एक "कोड" के हो? अर्थ, पर्यायवाची र idioms
अंग्रेजी भाषा लिंक मा पाठ्यक्रम: समीक्षा
अपार्टमेंट को स्वैच्छिक बीमा। बीमा कम्पनीहरु को दर्जा
जो ग्याँस मास्क आविष्कार? के रूस मा आविष्कार मास्क प्रभावित
सुनको जुङ्गा - प्रयोग चमत्कार बोट